Badhasaabka Maroodijeex Oo Digniin U Diray Dhalinyarro Kooxo Ah Oo Rebshado Ka Sameeya Caasimadda | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Hargaysa (SDWO.com): Badhasaabka gobolka Maroodijeex Maxamuud Ismaaciil Cilmi (deeq), ayaa fariin adag u diray waalidiinta dhalay dhalinyarro kooxo ah oo uu sheegay in ay habeenadii u danbeeyay falal budh-cadnimo ah ka gaysteen caasimadda Hargaysa.
Waxaanu sheegay in ay jiraan waalidiinta dhalay caruurta rebshadaha ka geysta xaafadaha iyo degmooyinka Hargaysa, gaar ahaana kuwa madaxda ah in ay marka caruurta la soo qabto ee xabsiga loo taxaabo ay xabsiga kaga daba taga, isla markaana ay soo daayaan.
Maxamuud Ismaaciil Cilmi (deeq), oo maanta warbaahinta xafiiskiisa kula hadlay waxa uu tilmaamay in maamulka gobolku wixii hadda ka danbeeya ay la xisaabtami doonaan waaldiinta caruurtaasi dhalay, isla markaana waalidiinta looga baahan yahay in ay marka hore caruurtoodda ilaashadaan.
Badhasaabka gobolka Maroodijeex, oo digniintaasi waalidiinta u dirayay-na waxa uu yidhi “Waxaa jira dhalinyarro kooxo ah oo magaaladda Hargaysa mashaakil ku haysa, dhalinyaradaasi waalidiin ayaa dhalay, niman madax ah ayaa dhalay. Waxaanan uga digaynaa waaldiinta iyo nimanka madaxda ah ee caruurtaasi dhalay, ee marka la xidho ka daba tegaya, waxaanu faraynaa in ay marka hore ubadkoodda qabsadaan”.
Geesta kale Maxamuud Ismaaciil Cilmi (deeq), waxa uu intaasi ku daray in mushkiladda koowaad ee dhalinyaradan kooxaha ah ee rebshadaha ka sameeya caasimadda ay masuuliyadooda leeyihiin waalidiintu.
“Ilamaha-na waalidkiisa ayaa mushkiladiisa leh, anagu waalidka ayaanu la xisaabtamaynaa, waayo ilmaha dhaqan xumo lagu soo qabto, ee isagoo dariiq taagan la soo qabto, ha ogaadaan, oo ha ka feejig-nadaan waalidka dhalay ee madaxda ahi in ay ka dabatagaan” ayuu yidhi badhasaabka Maroodijeex.
Si kastaba ha ahaatee, ma ah wax ku cusub caasimadda Hargaysa balse waa mid iska caadi ah oo inta badan ka dhacda in dhalinyarro kooxo ah ay xiliyadda habeenkii dhibaatooyin u gaystaan bulshadda.
hase yeeshee waxaa jirta in xaafadaha Hargaysa ay dhalinyaradu wakhtiyadda habeenkii falal isugu jira baadhasho iyo dhibaatooyin kale-ba ay ka gaystaan.
Sidoo kale waxaa dhacda in dhalinyaradda shuftadda ah ee is-kooxaysta ee xaafadaha caasimadda Hargaysa in mararka qaar ay iyaga laftoodu dagalamaan, kuwaasi oo ku hubaysan Faashash iyo Baangeyaal, isla markaana dhaawacyo iyo dhibaatooyin kale isku gaysta.